Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo tegi Doona Maxkamada Dagaalka Aduunka - Wargeyska Faafiye
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo tegi Doona Maxkamada Dagaalka Aduunka
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inuu awoodda dalka si ku meel gaar ah ugu wareejinayo ku xigeenkiisa, inta uu dalka kaga maqan yahay dhegeysiga dacwad ka dhan ah oo uga furan Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyada.
Mr. Kenyatta waxaa loo haystaa ilaa shan kiis oo la xiriira dembiyo ka dhan ah aadminimada. Waxaana lagu eedeynayaa inua gacan ka geystey abaabulka rabshadihii dhacay doorashadii lagu murmey ee Kenya sannadkii 2008.
Isagoo magaalada Nairobi kula hadlayey baarlamanka, hoggaamiyaha Kenya waxaa uu sheegay inuu xishmeyn doono dalabka looga doonayo inuu maalinta Arbacada ku hortago xarunta maxkamadda ee The Hague, halkaas oo dacwadiisa lagu eegi doono.
Waxaa uu sheegay in inta uu dalka ka maqan yahay, ku xigeenkiisa William Ruto uu ahaan doono si hayaha jagada madaxweynaha.
Maxkamadda ICC ayaa sidoo kale dacwad la xiriirta dembiyo ka dhan ah aadminimada soo oogtey Mr Ruto, kuwaas oo qeyb ka ah rabshadihii 2008-da.
Dhegeysiga dacwadda Mr. Kenyatta ayaa horey loo filayey inuu dhaco bishii February. Laakiin dhowr jeer ayaa dib loo dhigey, iyadoo Dacwad Oogaha Guud ee ICC, Fatou Bensouda, ay sheegtay in dowladda Kenya aaney maxkamadda u gudbin dokumenti muhiim ah oo laga dalbadey
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsTankiyada AMISOM oo Afgooye tagay.Ciidamada asluubta Soomaaliya oo u dabbaal-degay aas-aaskooda.DHAGEEYSO:Iftin Baasto oo Sheegay inuu Wali Joogo Kismaayo .Mas'uul lagu dilay MuqdishoSoomali Badan ayaa beryahaan danbe buux dhaafiyey xabsiyada Yemen